Ra’iisul Wasaaraha cusub oo sheegay in xalay kulan miro dhal ah uu la qaatay Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka – Kalfadhi
September 24, 2020 September 24, 2020 Hassan Istiila
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in xalay uu kulan miro dhal ah la qaatay Guddoomiyaha iyo Gudddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha shacabka, kaddib markii shalay si aqlabiyad leh uu Baarlamaanka u ansixiyay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa hoyga uu degan yahay ku booqday Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal oo uu wehliyay Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka C/weli Ibraahim Muudey.
Xildhibaanno ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid Guddoonka Golaha Shacabka loogu mahadceliyay doorkii ay ka qaateen ansixinta Ra’iisul Wasaaraha. Sidoo kale dhinacyada ayaa ka wadda hadlay howlaha shaqo ee horyaalla xukuumadda iyo dar-dar gelinta howlaha shaqo ee dalka
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shalay helay aqlabiyaha codka kalsoonida ee Baarlamaanka ayaa la filayaa in Golaha uu dib ugu noqon doonno marka uu soo magacaabo Golihiisa Wasiirrada si uu codka kalsoonida u weydiisto mar kale.
Akhriso: 8-da qodob oo saldhiga u noqon doonna Xukuumadda uu soo magacaabi doonno Ra’iisal Wasaare Rooble